Home News xubno sare oo katirsan Ururka Al Shabaab oo lagu dilay Gobolka Shabeellaha...
xubno sare oo katirsan Ururka Al Shabaab oo lagu dilay Gobolka Shabeellaha Dhexe
Saraakiil u hadlay kooxda la magac baxday Macaawisley ayaa waxaa ay sheegeen in ay Al-shabaab kula dagaalameen Gobolka Shabeellaha dhexe, islamarkaana halkaasi ay ku dileen xubno ka tirsan dagaalamayasha Al-Shabaab.
Dagaalka ayaa waxaa uu ka dhacay degaanka Guullane oo hoostaga Degmada Aadan Yabaal ee Gobolka Shabeellaha dhexe.
Inta la xaqiijiyay 8 qof ayaa ku dhimatay, halka Tiro intaa ka badana ay ku dhaawacmeen, sida ay sheegteen saraakiisha u hogaaminaysa Kooxda La magac baxday Macaawisley.
Xaalada deegaanka Guullane ayaa saakay degan, iyadoona cabsi ay ka jirto, taasi oo u dhexeysa Al-Shabaab iyo Kooxda La magac baxday Macaawisley.
Previous articleDowladda Talyaaniga oo balan qaaday iney taageero siin doonto Soomaaliya
Next articlemaxaa maanta looga hadli doona kulan Golaha Aqalka Sare
Shaqsiyaad u dhaw Farmaajo iyo kheeyre oo musuq-maasuq xoogan lagu helay...